အာဆင်နယ် ကို ပြောင်းရွှေ့ သွားတဲ့ ဒေးဗစ် လူးဝဇ် ကြောင့် တိုမိုရီ ကို နေရာပေးခဲ့တာလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်း အပေါ် တုန့်ပြန် ဖြေကြားလိုက်တဲ့ #လမ်းပတ် - SPORTS MYANMAR
အာဆင်နယ် ကို ပြောင်းရွှေ့ သွားတဲ့ ဒေးဗစ် လူးဝဇ် ကြောင့် တိုမိုရီ ကို နေရာပေးခဲ့တာလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်း အပေါ် တုန့်ပြန် ဖြေကြားလိုက်တဲ့ #လမ်းပတ်
ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အင်္ဂလန် နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ နောက်ဆုံးရက် မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီ က အသင်း ရဲ့ အဓိက ခံစစ်မှူး ဖြစ်တဲ့ ဒေးဗစ် လူးဝဇ် ကို မြို့ခံ ပြိုင်ဖက် အာဆင်နယ် အသင်း သို့ ပေါင် ၈ သန်း နဲ့ ရောင်းချ ခဲ့ပါတယ် ။ ဒေးဗစ် လူးဝဇ် ထွက်ခွာ သွားပြီးတဲ့နောက် မှာ ချယ်လ်ဆီး နည်းပြ ဖရန့် လမ်းပတ် ဟာ အကယ်ဒမီ ထွက် လူငယ် ခံစစ်မှူး ဖီကာယို တိုမိုရီ ကို စီနီယာ အသင်း မှာ ပိုပြီး နေရာ ပေးလာ ခဲ့ပါတယ် ။
တိုမိုရီ ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ က ဖရန့် လမ်းပတ် ကိုင်တွယ် ခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံရှစ် ကလပ် ဒါဘီ ကောင်တီ အသင်း သို့ အငှား ထွက်ကစား ခဲ့ကာ တည်ငြိမ်တဲ့ ပုံစံကောင်း တွေနဲ့ ခြေစွမ်း ပြသ နိုင်ခဲ့တာကြောင့် ဒါဘီ အသင်း ရဲ့ တရာသီ အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆု ကိုပါ ရရှိ ခဲ့ပါတယ် ။ အခု အခါမှာတော့ တိုမိုရီ ဟာ သူ အမြဲ မျှော်မှန်း ထားတဲ့ ချယ်လ်ဆီး စီနီယာ အသင်း အတွက် ကစားခွင့် ကိုပါ ရရှိ လာပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒေးဗစ် လူးဝဇ် ကြောင့် တိုမိုရီ ဟာ နေရာ ပိုရလာတယ် လို့ တချို့ က သုံးသပ် ကြပေမယ့် ချယ်လ်ဆီး နည်းပြ ဖရန့် လမ်းပတ် ရဲ့ ဖြေကြားချက် ကတော့ ” ကျွန်တော် ဟာ ဖီကာယို ကို အရင် ကတည်းက သတိထား မိခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် နီးနီးကပ်ကပ် တော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ သူ့ရဲ့ ခြေစွမ်း နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကယ်ဒမီ မှာ ကတည်းက ကောင်းသတင်း တွေ ကြားနေခဲ့ ရပါတယ် ။ ကျွန်တော် နဲ့ ဂျွန် ( တယ်ရီ ) ဟာ သူ့လို လူငယ် ကစားသမား တွေကို အကယ်ဒမီ မှာ သေချာ စောင့်ကြည့် ခဲ့ကြဖူးပါတယ် ။ ”
” ဒါဘီ ကို ကျွန်တော် စပြီး ကိုင်တွယ်တော့ ကျွန်တော် တို့မှာ ခံစစ်မှူး တယောက် လိုအပ် နေတော့ ဖီကာယို ကို ကျွန်တော် တို့ အငှား နဲ့ ခေါ်ယူဖို့ အသုံးတည့် သွားတာပေါ့ဗျာ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီ က ဖီကာယို ဒါဘီ ကို မရောက်လာခင် အထိ ကျွန်တော် တို့မှာ ခံစစ်မှူး ၂ယေက်ပဲ ရှိခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့ဒီ မှာ ဖီကာယို ကို ချယ်လ်ဆီး ကနေ အငှား နဲ့ ခေါ်ယူမယ့် အသင်း မရှိတာကြောင့် ရေတို အချိန် မှာ ခံစစ်မှူး လိုအပ်ချက် ကို ဖြေရှင်းဖို့ လိုနေတဲ့ ဒါဘီ အတွက် အဆင်ပြေ သွားခဲ့ပါတယ် ။ ”
” ကျွန်တော် သူ့ကို ခေါ်ဖို့ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ကို ဆက်သွယ် ခဲ့ပါတယ် ။ အဆုံးမှာတော့ သူဟာ ကျွန်တော် တို့ ကစားကွက် နဲ့ အံဝင် တဲ့ ခံစစ်မှူး တဦး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ သူ့ အကြောင်း ကို သိထားတဲ့ ဂျိုဒီ မောရစ် နဲ့ အတူ အလုပ်လုပ် ရတော့ ကျွန်တော့ အတွက် ပိုပြီး အဆင်ပြေ ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါကြောင့်မို့ သူ ကျွန်တော် တို့ အတွက် ဘယ်လို စွမ်းဆောင်မှု တွေ ပေးနိုင်လဲ ဆိုတာ ပိုပြီး သိရတာပေါ့ဗျာ ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့ နည်းစနစ် မှာ အံဝင်အောင် ကစား နိုင်ခဲ့တာ ကတော့ ဖီကာယို ရဲ့ ထက်မြက်မှု နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ချီးကျူး ရမှာပါ ။ ”
” ဒါဘီ အသင်း ဆီ ရောက်လာ ကတည်းက အခု ချယ်လ်ဆီး အသင်း မှာ ကစား နေရတဲ့ အထိ သူ့ရဲ့ ခံယူချက် နဲ့ စိတ်ဓာတ် က အတော်လေး မြင့်တက် နေပါပြီ ။ အစ ကနေ အဆုံး သူ့ရဲ့ ကြိုးစားမှု တွေက မလျော့ကျ ခဲ့တာကြောင့် သူဟာ ပိုပိုပြီး တိုးတက် လာတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော် ဟာ သူ့ကို ကစားသမား တယောက် အနေနဲ့ ယုံကြည်မှု ရှိပါတယ် ။ နေ့စဉ် သူ လေ့ကျင့် နေတဲ့ ပုံစံ ၊ သူ ကစားတဲ့ ပုံစံ တွေဟာ ကျွန်တော် မြင်ချင်တဲ့ အတိုင်း ထပ်တူ ကျနေပါတယ် ။ ”
” ဟုတ်ပါတယ် ။ သူဟာ အခု အချိန် မှာ ငယ်ရွယ် သေးတဲ့ ကစားသမား တဦး ဖြစ်ပါတယ် ။ အသင်း မှာ ရှိနေတဲ့ တခြား လူငယ် ခြေတက် တွေလိုပဲ သူ့ရဲ့ ခြေစွမ်း ဆက်ပြီး တိုးတက် နိုင်ပါသေးတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒီလို ဖြစ်လာဖို့ သူ့မှာ ပုံသေ ကြိုးစားမှု တခုတော့ ရှိဖို့ လိုပါတယ် ။ နဂို ကတည်းက သူ့ကို ကျွန်တော် ယုံကြည် ထားခဲ့တာပါ ။ အခုတော့ သူဟာ ချယ်လ်ဆီး ပထမ အသင်း ရဲ့ ကစားသမား တဦး ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ ။ ”
” ဒါကြောင့်မို့ အသင်း က ဘယ်သူပဲ ထွက်ထွက် ၊ ကျွန်တော် သူ့ အပေါ် ထားတဲ့ သဘောထား က ပြောင်းလဲ သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ကျွန်တော် ချယ်လ်ဆီး ကို မန်နေဂျာ အနေနဲ့ ရောက်လာ ကတည်းက ဖီကာယို ဟာ ကျွန်တော့ ရဲ့ အစီအစဉ် ထဲမှာ ပါဝင် နေခဲ့တဲ့ ကစားသမား တဦးပါ ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော် ဟာ သူ့ကို ယုံယုံကြည်ကြည် နဲ့ နေရာ ပေးလိုတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ ။ သူ ငယ်ငယ် ကတည်းက ကစား ပေးတဲ့ ကလပ် အသင်း အတွက် ကစားပေးဖို့ ထက် ပိုကောင်းတဲ့ နေရာ ရှိနိုင်ပါ့မလား ? ” လို့ ပြောကြား ခဲ့ပါတယ် ။
အာဆငျနယျ ကို ပွောငျးရှေ့ သှားတဲ့ ဒေးဗဈ လူးဝဇျ ကွောငျ့ တိုမိုရီ ကို နရောပေးခဲ့တာလား ဆိုတဲ့ မေးခှနျး အပျေါ တုနျ့ပွနျ ဖွကွေားလိုကျတဲ့ #လမျးပတျ
ခယျြလျဆီး အသငျး ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ အင်ျဂလနျ နှရောသီ အပွောငျးအရှေ့ နောကျဆုံးရကျ မှာ ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီ က အသငျး ရဲ့ အဓိက ခံစဈမှူး ဖွဈတဲ့ ဒေးဗဈ လူးဝဇျ ကို မွို့ခံ ပွိုငျဖကျ အာဆငျနယျ အသငျး သို့ ပေါငျ ၈ သနျး နဲ့ ရောငျးခြ ခဲ့ပါတယျ ။ ဒေးဗဈ လူးဝဇျ ထှကျခှာ သှားပွီးတဲ့နောကျ မှာ ခယျြလျဆီး နညျးပွ ဖရနျ့ လမျးပတျ ဟာ အကယျဒမီ ထှကျ လူငယျ ခံစဈမှူး ဖီကာယို တိုမိုရီ ကို စီနီယာ အသငျး မှာ ပိုပွီး နရော ပေးလာ ခဲ့ပါတယျ ။
တိုမိုရီ ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ က ဖရနျ့ လမျးပတျ ကိုငျတှယျ ခဲ့တဲ့ ခနျြပီယံရှဈ ကလပျ ဒါဘီ ကောငျတီ အသငျး သို့ အငှား ထှကျကစား ခဲ့ကာ တညျငွိမျတဲ့ ပုံစံကောငျး တှနေဲ့ ခွစှေမျး ပွသ နိုငျခဲ့တာကွောငျ့ ဒါဘီ အသငျး ရဲ့ တရာသီ အကောငျးဆုံး ကစားသမားဆု ကိုပါ ရရှိ ခဲ့ပါတယျ ။ အခု အခါမှာတော့ တိုမိုရီ ဟာ သူ အမွဲ မြှျောမှနျး ထားတဲ့ ခယျြလျဆီး စီနီယာ အသငျး အတှကျ ကစားခှငျ့ ကိုပါ ရရှိ လာပွီ ဖွဈပါတယျ ။
ဒေးဗဈ လူးဝဇျ ကွောငျ့ တိုမိုရီ ဟာ နရော ပိုရလာတယျ လို့ တခြို့ က သုံးသပျ ကွပမေယျ့ ခယျြလျဆီး နညျးပွ ဖရနျ့ လမျးပတျ ရဲ့ ဖွကွေားခကျြ ကတော့ ” ကြှနျတျော ဟာ ဖီကာယို ကို အရငျ ကတညျးက သတိထား မိခဲ့ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ နီးနီးကပျကပျ တော့ မဟုတျပါဘူး ။ သူ့ရဲ့ ခွစှေမျး နဲ့ ပတျသကျပွီး အကယျဒမီ မှာ ကတညျးက ကောငျးသတငျး တှေ ကွားနခေဲ့ ရပါတယျ ။ ကြှနျတျော နဲ့ ဂြှနျ ( တယျရီ ) ဟာ သူ့လို လူငယျ ကစားသမား တှကေို အကယျဒမီ မှာ သခြော စောငျ့ကွညျ့ ခဲ့ကွဖူးပါတယျ ။ ”
” ဒါဘီ ကို ကြှနျတျော စပွီး ကိုငျတှယျတော့ ကြှနျတျော တို့မှာ ခံစဈမှူး တယောကျ လိုအပျ နတေော့ ဖီကာယို ကို ကြှနျတျော တို့ အငှား နဲ့ ချေါယူဖို့ အသုံးတညျ့ သှားတာပေါ့ဗြာ ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီ က ဖီကာယို ဒါဘီ ကို မရောကျလာခငျ အထိ ကြှနျတျော တို့မှာ ခံစဈမှူး ၂ယကျေပဲ ရှိခဲ့ပါတယျ ။ အဲ့ဒီ မှာ ဖီကာယို ကို ခယျြလျဆီး ကနေ အငှား နဲ့ ချေါယူမယျ့ အသငျး မရှိတာကွောငျ့ ရတေို အခြိနျ မှာ ခံစဈမှူး လိုအပျခကျြ ကို ဖွရှေငျးဖို့ လိုနတေဲ့ ဒါဘီ အတှကျ အဆငျပွေ သှားခဲ့ပါတယျ ။ ”
” ကြှနျတျော သူ့ကို ချေါဖို့ ခယျြလျဆီး အသငျး ကို ဆကျသှယျ ခဲ့ပါတယျ ။ အဆုံးမှာတော့ သူဟာ ကြှနျတျော တို့ ကစားကှကျ နဲ့ အံဝငျ တဲ့ ခံစဈမှူး တဦး ဖွဈခဲ့ပါတယျ ။ သူ့ အကွောငျး ကို သိထားတဲ့ ဂြိုဒီ မောရဈ နဲ့ အတူ အလုပျလုပျ ရတော့ ကြှနျတော့ အတှကျ ပိုပွီး အဆငျပွေ ခဲ့ပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့မို့ သူ ကြှနျတျော တို့ အတှကျ ဘယျလို စှမျးဆောငျမှု တှေ ပေးနိုငျလဲ ဆိုတာ ပိုပွီး သိရတာပေါ့ဗြာ ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတော့ နညျးစနဈ မှာ အံဝငျအောငျ ကစား နိုငျခဲ့တာ ကတော့ ဖီကာယို ရဲ့ ထကျမွကျမှု နဲ့ ပတျသကျပွီး ခြီးကြူး ရမှာပါ ။ ”
” ဒါဘီ အသငျး ဆီ ရောကျလာ ကတညျးက အခု ခယျြလျဆီး အသငျး မှာ ကစား နရေတဲ့ အထိ သူ့ရဲ့ ခံယူခကျြ နဲ့ စိတျဓာတျ က အတျောလေး မွငျ့တကျ နပေါပွီ ။ အစ ကနေ အဆုံး သူ့ရဲ့ ကွိုးစားမှု တှကေ မလြော့ကြ ခဲ့တာကွောငျ့ သူဟာ ပိုပိုပွီး တိုးတကျ လာတာ ဖွဈပါတယျ ။ ကြှနျတျော ဟာ သူ့ကို ကစားသမား တယောကျ အနနေဲ့ ယုံကွညျမှု ရှိပါတယျ ။ နစေ့ဉျ သူ လကေ့ငျြ့ နတေဲ့ ပုံစံ ၊ သူ ကစားတဲ့ ပုံစံ တှဟော ကြှနျတျော မွငျခငျြတဲ့ အတိုငျး ထပျတူ ကနြပေါတယျ ။ ”
” ဟုတျပါတယျ ။ သူဟာ အခု အခြိနျ မှာ ငယျရှယျ သေးတဲ့ ကစားသမား တဦး ဖွဈပါတယျ ။ အသငျး မှာ ရှိနတေဲ့ တခွား လူငယျ ခွတေကျ တှလေိုပဲ သူ့ရဲ့ ခွစှေမျး ဆကျပွီး တိုးတကျ နိုငျပါသေးတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ဒီလို ဖွဈလာဖို့ သူ့မှာ ပုံသေ ကွိုးစားမှု တခုတော့ ရှိဖို့ လိုပါတယျ ။ နဂို ကတညျးက သူ့ကို ကြှနျတျော ယုံကွညျ ထားခဲ့တာပါ ။ အခုတော့ သူဟာ ခယျြလျဆီး ပထမ အသငျး ရဲ့ ကစားသမား တဦး ဖွဈလာခဲ့ပါပွီ ။ ”
” ဒါကွောငျ့မို့ အသငျး က ဘယျသူပဲ ထှကျထှကျ ၊ ကြှနျတျော သူ့ အပျေါ ထားတဲ့ သဘောထား က ပွောငျးလဲ သှားမှာ မဟုတျပါဘူး ။ ကြှနျတျော ခယျြလျဆီး ကို မနျနဂြော အနနေဲ့ ရောကျလာ ကတညျးက ဖီကာယို ဟာ ကြှနျတော့ ရဲ့ အစီအစဉျ ထဲမှာ ပါဝငျ နခေဲ့တဲ့ ကစားသမား တဦးပါ ။ ဘာကွောငျ့လဲ ဆိုတော့ ကြှနျတျော ဟာ သူ့ကို ယုံယုံကွညျကွညျ နဲ့ နရော ပေးလိုတဲ့ အတှကျကွောငျ့ပါ ။ သူ ငယျငယျ ကတညျးက ကစား ပေးတဲ့ ကလပျ အသငျး အတှကျ ကစားပေးဖို့ ထကျ ပိုကောငျးတဲ့ နရော ရှိနိုငျပါ့မလား ? ” လို့ ပွောကွား ခဲ့ပါတယျ ။